Brazil Oo Si Sahlan Ugu Soo Gudbay Finalka Olymbics kadib markii 3-0 uu ugaga badiyay xulka Koonfur Kuriya - jornalizem
Brazil Oo Si Sahlan Ugu Soo Gudbay Finalka Olymbics kadib markii 3-0 uu ugaga badiyay xulka Koonfur Kuriya
Xulka kubbada cagta dalka Brazil ayaa u soo gudbay ciyaarta kama dambaysta ah ee finalka tartanka Olymbicska ee ka socda dalka Ingiriiska kadib markii kulanka Semifinalka ay 3-0 ugaga badiyeen xulka Koonfur Kuuriya.
Kulankan oo ka dhacay garoonka Old Trafford ayaa mid ka mid ah goolasha ay dhalisay Brazil waxa uu ahaa mid la dhaliyey qeybtii hore ee ciyaarta waxaana daqiiqadii 38aad u dhaliyey Romulo.
Hase yeeshee goolkaa ka hor ayaa ciyaarta waxaa si weyn ugaga dhex muuqday xulka Koonfur Kuriya oo fursado badan qasaariyey.
Xulka Koonfur Kuuriya oo dadaal badan sameeyey ayaan u suurtogelin in uu wax gool ah ka dhaliyo ciyaarta. Balse qeybtii dambe ee ciyaarta kubbado uu soo dhisey laacibka Brazil ee Neymar waxaa dhamaystirey weeraryahankooda lambarka 9aad Leandro Damaio.
Xulka Brazil ayaa kulanka finalka waxa ay wada ciyaari doonaan xulka Mexico oo soo reebay xulka Japan,waxana ay noqotay inciyaarta finalka ay isku arkaan labo wadan oo ka socota Latin America Mexico iyo Brazil kadib markii ay reebeen labada wadan ee ka socotay qaarada Asiya ee Japan iyo Koonfur Kuriya.
Xulka Brazil ayaa soo afjaray 18kulan oo aan dhinacooda dhulka la dhigin xulka Koonfur Kuriya, waxana xulka Brazil kulanka finalka uu la ciyaari doonaa xulka Mexico oo soo reebay xulka Japan.
Waxana uu xulka Brazil is keenay ciyaarta finalaha isaga oo aan dhinaciisa dhulka la dhigin isla markaan ciyaar kasta ee uu Olympicska ka ciyaaro uu mid walba ku badinayay saddex gool.